Xuquuqda Siyaasiga Soomaaliya Hindise Sharciyeed Ka Hadlaya Oo Maanta Xubnaha Golaha Shacabka Loo Qeybiyey – Kalfadhi
Xildhibaanada Golaha Shacab ayaa loo qeybiyey maanta Hindise Sharciyeedka Xuquuqda Liil Tirka Siyaasiinta, oo xoogiisa ka hadlaya xaqa siyaasiga Soomaaliyeed, marka uusan ku jirin shaqada dowladda ee uusan dalka u hayn masuuliyad. Hindisaha ayaa u doodaya siyaasiga, mar u soo shaqeeyey qaranka, kaas oo uu sharcigu ka digayo inuu ku dar-xumoodo dalka iyo dibadda marka uusan xil u ahayn qaranka.
Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad, oo ah Gudoomiye Kuxigeenka Labaad ee Golaha Shacabka, ayaa u sheegay Xildhibaanada in Hindisahaan oo kale la horkeenay Baarlamaankii 9-aad ee Soomaaliya, “hase ahaatee ma uu ku guuleysan” buu yiri Gudoomiye Mahad. “Waxaan codsanayaa in haddii arrin la siinayo muhiimad laga bilaabo kan” ayuu yiri Mahad. Waxaa uu sheegay in Baarlamaankii 9-aad uu waqtagii ka dhamaaday intii ay ku mashquulsanaayeen awoodaha iyo xuquuqaadka Madaxda Golayaasha.
Xoghayaha Gudiga Xeer Hoosaadka iyo Xasaanad Siinta ee Hindisahaan u soo gudbiyey Golaha Shacabka, Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan, ayaa sheegay inuu Hindisahan markuu Xeer noqdo siinayo xaq siyaasiinta hadda kadib ka bixi doontaa shaqada ay u hayaan qaranka iyo kuwa horay uga baxay intaba. “Miisaaniyadda kuma jirto waxa uu rabo inuu sharcigani xaliyo” ayuu yiri Xildhibaan Faarax. Waxa uu carrabka ku adkeeyey iney qasab tahay in loo helo miisaaniyad, inta uusan Hindisahani noqon Xeer.
Xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye, oo ah Gudoomiyaha Gudiga Hindisahan horkeenay Golaha, ayaa u sheegay Xildhibaanada inuu Hindisahani si fiican u muujinayo sida uu siyaasiga Soomaaliyeed nafta ugu huray inuu u adeego qaranka. Waxa uu xusay ineysan qaranka iyo siyaasigaba u wanaagsaneen iney madaxda iyo masuiyiinta dalka dhibaato nololeed iyo mid ammaan galaan, marka ay banaanka ka joogaan shaqada dowladnimada ama hawlgab noqdaan. “Wuxuu sugayaa sharcigaan xuquuqda qof walba oo siyaasiya” ayuu yiri Gudoomiye Maxamuud.
Gudoomiye Kuxigeenka Labaad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, ayaa, isagoo hadalka u jeedinaya Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, waxa uu sheegay inuu qofka, shaqa siyaasadeed kasoo qabtay Soomaaliya, ku heli karo xaq, kaliya inuu Goluhu ansixiyo Hindisahaan. “Ma ogaan kartaan inaad berri Xildhibaan sii ahaan doontaan, ee sharcigaan waxa uu ilaalinayaa xuquuqdiina berri ee caruurtiina, qoyskiina iyo noloshiina e, hadda si degdeg ah u ansixiya” ayuu yiri Gudoomiye Cawad.
Gudoomiyaha Gudiga Hindisahan, Maxamuud Macalin Yaxye, ayaa u sheegay Golaha inuu Gudigu soo saxay Hindisaha, oo uu kasoo saaray wax ku jiray markii la horkeenayey Baarlamaankii 9-aad, ayna kusoo dareen wax cusub. “Waxaan kasoo saarnay sharcigaan wax kasta oo muujinaayey isu dheelitirnaan la’aan xuquuqeed, waxaana isu dheelitirnay xuquuqaadka” ayuu yiri Gudoomiye Maxamuud.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa soo aqrin doona Hindisaha, kadibna kulan kale, oo ka mid ah kulamada soo socda ee Golaha, ayey Aqriskiisa Labaad uga doodi doonan Hindisahan. Marka uu ka gudbo Aqriska Labaadna, waxa ay ugu dambeyntii Xildhibaanadu u qaadi doonaan cod ay Xeer uga dhigayaan ama ku diidayaan.